Wasaaradda Warfaafinta oo Cambaareysay Dilkii Iskudayga ee Wariyihii Universal
Updated About:318 days ago 0
Bayaan maanta laga soo saaray xafiiska Wasaarada Warfaafinta Dowlada KMG Soomaalia ku leedahay Muqdisho ayaa lagu cambaareeyey dhaawaci xalay loo geystay wariye C/qadri Cumar Cabdulle.
Qoraalka oo kasoo baxay xafiiska Wasaaradda Warfaafinta ayaa u qornaa sidan:-
(Muqdisho– July 8, 2012) DowladdaSoomaaliya waxay cambaareyneysaa iskudaygii la rabay in lagu dilo xalaywariyihii Universal Television, Cabdulqaadir Cumar Cabdulle, kaas oo dhaawacculus ka soo gaaray dhanka caloosha kadib markii ay laba nin oo aan heybtoodala aqoon kusoo weerareen gurigiisa oo ku yaal degmada Wadajir ee gobolkaBanaadir.
WasiirkaWarfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta, Mudane Cabdulqaadir Xuseen Maxamed ayaacambaareyn kulul u jeediyay, asaga oo leh “Waan cambaareyneynaa iskudaygii larabay in lagu dilo wariyaha, waxaana ku baaqeynaa in baaritaan lagu sameeyoqoladii ka danbeysay fal danbiyeedkaas.”
Dowladda waxayugu baaqeysaa shacabka in ay la shaqeeyaan xoogaga amniga si loo xaqiijiyo inlaga hortago falalka danbiyada ee dhamaan dalka oo idil, oo ay ku jiraan kuwaargagixisada oo halis ku ah bulshada.
“Waa in aysanshacabku ka yeelin qolyaha masuulka ka ah falalka danbi in ay cabsi galiyaan,isla markaana ay taageeraan dadaalka loogu jiro in amniga caasimada lagu xaliyotaas oo ka hortagi doonta kuwa cadeystay cadaawadda ay u hayaan wariyeyaashaiyo dadka nabadda ka shaqeeya” ayuu yiri Mudane Cabdulqaadir.
WasaaradaWarfaafinta waxay dhiiragalineysaa qof walba oo haya warbixin ku saabsan faldanbiyeedkii la rabay in lagu dilo wariyihii Universal Television si dadkiiarintaas ka danbeeyay bulshada looga qabto oo xabsiga loo dhigo.